Ikhaya » izithuba » Iindaba zewayini » I-Champagne kuye wonke umntu yi-COVID Stimulus yakho
Iindaba zokuhamba ngeshishini • IiNdaba zokuHamba ngeeNkcubeko • Iindaba zeNkcubeko yokuHamba • Iindaba zokuhamba eFrance • Iindaba Zokuhamba eHawaii • omnye • ukwakha uhambo kwakhona • Iindaba zoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zokuHamba • Iimfihlo zohambo • Iindaba eziShukumayo • Iindaba ze-USA • Iindaba zewayini
I-Champagne kuye wonke umntu yi-COVID Stimulus yakho
Februwari 20, 2021
UMseki weVeki yeChampagne yeNew York ,, uBlaine Ashley, udliwanondlebe noGqirha Elinor Garely, apho ingxoxo yayijolise ekubeni kutheni iChampagne iyile nto kanye ifunwa lihlabathi ngoku.
Ngaba ukuvula ibhotile yeChampagne kungasinceda ukuba sidlule kwindlela erhabaxa, enamaqhuma, engqindilili, engalinganiyo eyaziwa ngokuba yi-COVID-19?
Abathengi abaninzi bayayonwabela unyaka wonke kwiitafile zosapho kunye nesidlo sangokuhlwa senkukhu ethosiweyo kunye neefry zaseFrance.
Ukuphela kuka-2020 kwabona iWashington, DC, abathengisi abathengisa i-champagne engakumbi emva kokuphumelela kwe-Biden / Harris kunemibhiyozo emibini edlulileyo yo-Eva.
Ukuqala kwangoko kwe-2020, ilizwe njengoko besilazi, siphila kulo, linamava kwaye rhoqo-nditsho ndalithanda… litshintshiwe. Olu tshintsho alunikezelwanga ngabayili abanetalente, amagcisa, iimvumi, abapheki, okanye abayili. Olu tshintsho lwenziwe ngooMongameli bangaphambili, amagosa aseburhulumenteni oorhulumente behlabathi, kunye nabaphathi benkampani abathi, ngaphaya kokulindelweyo, bakwazi ukungahoyi isayensi ngenkolelo yokuba ULAWULO lwezopolitiko.
Njengothixo ozimele geqe kunye noo-demi, oozwilakhe abadibeneyo, kunye nezinye iinkokeli eziphosakeleyo phambi kwabo, imbali inika umbono wethemba. Ngelixa elidlulileyo elikufutshane kunye nekamva elifutshane libonakala limfiliba, ukhanyiselo luya kuhlala lukhona… ukuba singaphila ixesha elide ngokwaneleyo!
Ke-sihamba njani kwindlela erhabaxa, enamaqhuqhuva, engalinganiyo ngaphambili? Sivula ibhotile yeChampagne kwaye sijonge amaqamza ngenkolelo yokuba abanye bayenzile ngeemfazwe, indyikitya yokufa, ubuhlanga nentiyo, kwaye somelele ngokwaneleyo kwaye somelele ngokwaneleyo ukuba siyenze nge-COVID-19.
Phambi ko-2020, ukusetyenziswa kweChampagne kwakunyukile ngokuthunyelwa kwelinye ilizwe e-US kukhula ngaphezulu kweebhotile ezigidi ezi-5 phakathi kuka-2015 no-2019 (iComite Champagne) kunye nesabelo sentengiso saseChampagne sonyuke nge-3.51 yeepesenti ukusukela ngo-2016 (eDrizly).
Ngelishwa, abalimi beediliya kunye nabavelisi bewayini eChampagne, eFrance, kunye nehlabathi liphela, bachatshazelwe kakubi ngulo bhubhane. Ukuqala ngo-Epreli 2020, imakethi yaseChampagne yehle nge-1/3, elingana ne- $ 2 yezigidigidi kwingeniso kwaye zilingana neebhotile ezili-100 lezigidi zeChampagne - ezishiyekileyo kuluhlu lwezinto ... azithengiswanga.
Eli ayilixesha lokuqala ukuba abathengi bayifulathele iChampagne. Ngo-2009, kukho ukuhla kweepesenti ezingama-28 kumazwe angaphandle, kwaye ngexesha loxinzelelo olukhulu, phantse kwikhulu leminyaka eyadlulayo, iChampagne yayingenguye isiselo esikhethiweyo. Ngamanye amagama, ukuhla kwe2020 kuye kwaba yintlekele emangalisayo kodwa ayothusi.
Imiceli mngeni ejongene neChampagne
Ingxaki ayikho ngenxa yemveliso kodwa kugxilwe kuyo kwintengiso. I-Champagne ilinganiswa namaqela abantu abonwabileyo, babhiyozela ukuqala kobomi (ukuzalwa ngokutsha), umsebenzi omtsha (okanye ukunyuselwa), umtshato okanye isikhumbuzo, ukuphumelela ilotto, okanye ukugqiba umdyarho. Yonke le misebenzi ibisenziwa ngokwesiqhelo ibonelela ngendawo efanelekileyo yokusasazeka okukhawulezayo nokungakhathali kwe-COVID-19 kwaye, ke ngoko, ibekwe phezulu kuluhlu lwe-NO GO. Kwi-Southern California, phantse iipesenti ezingama-60 zentengiso yeChampagne inxulunyaniswa nemibhiyozo. Xa ubhubhane uhlaselayo, ukuthengisa kwehla ngeepesenti ezingama-30. Ngexesha lokuvalwa kweYurophu, ukuthengiswa kwe-champagne kuye kwehla malunga neepesenti ezingama-75.
I-Champagne yayihlala isisiselo sokhetho kubagibeli abahleli kwizitulo zokuqala nezeshishini kwiinqwelomoya. I-COVID-19 ishenxisile ubuhle, indawo yokutyela enezinto ezininzi kunye nenkonzo eshushu yangaphambili eyayisaziwa njengabathwali abanjengeSingapore Airlines Ltd. kunye neCathy Pacific Airways Ltd. Ugqaliso lwangoku lwenqwelomoya kukhuseleko nococeko, ukubonelela ngezigqubuthelo zobuso kunye nezicoci zandla hayi Ishampeyini.
Unyaka Wesithathu Wokufudumala Kwehlabathi
Ummandla waseChampagne unamava amathathu ashushu. Ubushushu behlabathi butshintshe imozulu, kudala iithayimthebile ezintsha kunye nemiceli mngeni kwiingcali zeshishini lewayini. Ukususela ngoJanuwari ukuya kuJuni, amaqondo obushushu agqithise kumndilili orekhodiweyo. Ukudubula kwangoko kunye neediliya kutshiswe elangeni ngo-Agasti kwatshintsha i-physiology yomdiliya. Iidiliya zazikhiwa kwangoko kakhulu ngo-3 (Agasti 2020) kwingingqi yeAube.
Kusenokwenzeka ukuba kusekutsha kakhulu ukumisela ukuba u-2020 uya kuba ngunyaka weediliya, kodwa iingcali zichonge ukuba kunokwenzeka ukuba kuya kuba mnandi kuba kukho ulungelelwaniso oluhle phakathi kokuvuthwa, i-asidi kunye neswekile.
Ukuqwalaselwa kwesi sifo
Abalimi be-Champagne kunye nabavelisi baqhelene nokujongana nemeko-bume yemozulu, umhlaba, kunye neencukuthu ezijija izidiliya, amagqabi kunye neediliya; Nangona kunjalo, intsholongwane ehlasela abasebenzi kunye nabenzi bewayini ibe ngumceli mngeni ongaphaya kobuchule babo. Iingxaki zempilo zifuna ukujonga okutsha kwimveliso yazo, imveliso, ukuhanjiswa, kunye nokusetyenziswa, zifuna ukuhlengahlengiswa kwenkqubo eqhelekileyo.
Imigaqo yeKomiti yeChampagne
YiKomiti yeChampagne, emele i-16,000 yevinters kwingingqi yeChampagne yaseFrance eyenza imithetho kubavelisi bewayini. Inyathelo lokuqala yayikukukhusela abasebenzi kwaye emva koko baqeqeshe ngokulandela iinkqubo zococeko. Inyathelo elilandelayo yayikukubeka umda kubungakanani beediliya ezinokuvunwa ngenjongo yokuxhasa amaxabiso. Icandelo elibuhlungu lebali kukuba inani elikhulu leediliya zatshatyalaliswa okanye zathengiswa kwii-distilleries ngamaxabiso esaphulelo. IKomiti igqibe ekubeni iivinters ziya kuvunyelwa ngokudibeneyo ukuvuna iikhilogram ezingama-8000 zeediliya ngehektare nganye ukulungiselela ixesha lonyaka, okanye ezilingana neebhotile ezingama-230 ezigidi zommandla wonke ongaphantsi ngeepesenti ezingama-21 kunemali evunyelweyo ngo-2019.
Uncedo kuRhulumente waseFrance
Izindlu zeChampagne zine-inventri kunye nezinye izibonelelo zemali; Nangona kunjalo, iwayini kunye nomhlaba ayingamanzi kwaye, ke ngoko, ayifumaneki ukuhlawula ababolekisi. I-Champagne winemakers ikwazile ukufikelela kwi-pret garanti par l'Etat (PGE) kurhulumente onenzala ephantsi eqinisekisiweyo yemali mboleko ukuya kuthi ga kwiinyanga ezi-3 zengeniso ka-2019 enemigaqo elula yokuhlawula de kube ngu-2022.
Ekuqaleni kobhubhane, abanamatyala baqala ukusilela kwintlawulo ngelixa ukuthengisa kungahambi kakuhle. I-PGE ivumele ukuhlawulwa kwetyala kwangexesha, kunye nemivuzo yabasebenzi. Urhulumente uphinde wahlawula abasebenzi abanesikhundla esingasafunekiyo ngokusebenzisa i-chomage partiel (abasebenzi abachaphazeleke kukuphulukana nomvuzo babuyiselwa ngumqeshi). Ngale nkqubo, umqeshwa uyaqhubeka nokufumana iipesenti ezingama-85 zomvuzo wakhe nangona bengasebenzi. Olunye uncedo lukarhulumente-ukuthanda i-solidarite -kunceda iinkampani ukuba zihlale ngaphezulu kwamanzi. Phantsi kweemeko ezithile, urhulumente ucima iintlawulo zentlalo kunye / okanye iirhafu zexesha elithile apho ingeniso incitshisiwe kakhulu. Ezi nkqubo zithintele imiba yokuhlawula amatyala kwaye zinokuthintela ukuqhubekeka kwemali okanye ukudibanisa.
Kuya kuba ngaphantsi kobugcisa bokungena kwivenkile yewayini okanye kwincoko yababini kunye nomncedisi kwaye ucele nje iglasi yeChampagne! Njengazo zonke iimveliso zodidi, uphawu lubalulekile njengemveliso. Iinkokeli zohlobo lweChampagne ziqala ngeMoet, kunye neMoet Hennessy amanqaku aphezulu kuluhlu lweChampagne njengecandelo le-LVMH (iLouis Vuitton Moet Hennessy) eneempawu ezi-6 zeChampagne ezibandakanya iVeuve Clicquot, iMoet kunye neChandon, kunye neDom Perigon. Imoet kunye neChandon yeyona ndlu inkulu yaseChampagne ethengisa iibhotile ezizigidi ezingama-64.7 ngo-2019 ngamaxabiso aqala malunga ne- $ 42 ngebhotile nganye. Zonke iimveliso zeMoet Hennessy zibonelela ngokungena kwemali kwi-LVMH ye-2.21 yezigidigidi ze-euro, kuqeshwe abantu abangama-2485.
IVranken-Pommery Monopole lelona qela lesibini likhulu leChampagne kwaye ineempawu ezintlanu zeChampagne kubandakanya iVranken, iDemoiselle, uCharles Lafitte 183, iPommery, kunye neHeidsieck & Co evelisa ingeniso ye-218.8 yezigidi zeerandi. Inkampani ilawula iihektare ezingama-2600 zomhlaba (ezona zinkulu eYurophu) zisasazeka ngaphezulu kwezidiliya ezi-4 eChampagne, eProvence, eCamargue naseDouro.
INicolas Feuillate Champagne House ivelisa i-211.9 yezigidi zeerandi kwingeniso elandelwa nguLauren Perrier nge-206.2 yezigidi ze-euro. IPiper Heidsieck (iCopagnie Champenoise PH-CS) ivelisa umvuzo wonyaka we-109.2 yezigidi zeerandi. Eyona ndlu indala yaseChampagne, iGosset, ivelisa ingeniso yonyaka yezigidi ezingama-23.7 zeerandi (BoldData.com).
NgokukaMichelle DeFeo, umongameli waseLaurent-Perrier US, uninzi lweChampagne luthengelwa imibhiyozo yeholide; Nangona kunjalo, abathengi abaninzi bayayonwabela unyaka wonke. Ngenxa yokuba i-Champagne ibhangqwe kakuhle kakhulu kukutya, sele iqale ukubonakala kwiitafile zosapho kunye nesidlo sangokuhlwa senkukhu ethosiweyo kunye neefries ngokutsho kukaPhilippe Andre, inxusa laseMelika leChampagne Charles Heidsieck. I-Moet Imperial Brut liqabane elifanelekileyo le-sushi.
Intengiso yeChampagne yabona ukunyuka eMelika ekupheleni kuka-2020 emva kokhetho lukamongameli. Abathengisi eWashington, DC, bathengise i-champagne emva komnyhadala kunemibhiyozo yoNyaka oMtsha woMbhiyozo odityanisiweyo xa abavoti bebhiyozela ukuphumelela kweBiden / Harris. Nditsho naseBrooklyn, NY, bekukho iChampagne yokuthenga ispree, kwaye umthengisi wewayini wasekhaya wagqiba kwelokuba ithengise iipesenti ezingama-600 ngaphezulu kwewayini emva konyulo kuneeveki ezidlulileyo kwaye yagqibela ngokuthengisa uluhlu lwayo lonke.
Abathengisi bevenkile abathengisa iwayini baphinde baqeqesha abasebenzi ngokusekwe kuphando lweChampagne ukufumanisa ukuba esona sizathu sokuthengiswa kweChampagne kwindawo yokuthenga yingcebiso yomthengisi; Ke ngoko, uqeqesho lwabasebenzi kwintengiso luya kugxila kwizindululo zeebhotile eziphakamileyo zomda weChampagne.
I-Champagne ibekwe endaweni yokufumana kwakhona isabelo sentengiso kwaye ithengise iibhotile ezizizigidi ezingama-300 ukuphela kuka-2021 okanye u-2022 kutshanje.
Oko kufunwa liLizwe ngoku
UBlaine Ashley, uMseki, iVeki yaseNew York yeChampagne; UFizz nguBasetyhini
cofa ukumamela ipodcast
Ukuqala ngo-2013, uBlaine Ashley ebeyinxalenye ebalulekileyo yeshishini leChampagne kwaye linoxanduva lobuqu lokuqaqambisa imveliso ngokudala, iminyhadala eneenkcukacha eziphezulu ezazisa ulwazi ngorhwebo, imithombo yeendaba kunye neemarike zabathengi kweli candelo libalulekileyo lewayini. Kwi-2018, u-Ashley wasungula i-Fizz ngowasetyhini, uthotho lweenkqubo kunye neziganeko ezithi babhiyozele abasetyhini abakhokela ishishini lewayini eliqaqambileyo. Ukuqonda ukubaluleka kuka-Ashley kwimveliso yewayini ehlwahlwazayo, umagazini i-Wine Enthusiast wamthiya igama lokuba yiNdlovukazi yaseChampagne kwaye wambandakanya njenge-40 phantsi kwe-40 Tastemaker (2016).
Uzalelwe e-Honolulu, eHawaii, u-Ashley waqala umsebenzi wakhe wokuthengisa kwimfashini ngeeMagazini zangoku zeLuxury kunye neeHaute. Ngo-2010, wafudukela eNew York waqalisa ikholamu yakhe yanyanga zonke, i- Sipped 'n Scene, epapashwe kwiPhaneli yokuNcamisa kunye neNdawo yokuHamba.
NgoFebruwari 19, 2021, U-Ashley wenza udliwanondlebe nguGqirha Elinor Garely, ku WorldTourismNetwork apho ingxoxo yayijolise ekubeni kutheni iChampagne iyile nto kanye le ifunwa lihlabathi ngoku.